Onlooker Play ဆိုတာ ဘာလဲ? ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်သလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care Onlooker Play ဆိုတာ ဘာလဲ? ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်သလဲ?
မေမေတို့ကလေးက တခြားကလေးတွေနဲ့ ကစားမယ့်အစား သူတို့ကစားနေတာကိုသာ ထိုင်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ကလေးကို ဝင်ကစားဖို့ တိုက်တွန်းပေမယ့် သူတို့က ငြင်းပယ်ပြီး သူများကစားတာကို ကြည့်ဖို့သာ ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ကလေးက အခြားသူတွေ ကစားတာကို ကြည့်ပြီး ပျော်နေပုံရတာကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို (Onlooker play) တခြားသူကစားတာ ကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးဟာ လူမှုရေးအရ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားမှာကို စိုးရိမ်ကောင်း စိုးရိမ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ဒီပို့စ်လေးမှာ onlooker play ဆိုတာဘာလဲ? ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ? ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
Onlooker Play ဆိုတာဘာလဲ?
၁၉၃၂ခုနှစ်၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ Mildred Parten Newhall က သူမရဲ့စာတမ်းသုတေသနတစ်ခုမှာ ကလေးရဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကစားခြင်းရဲ့အဆင့်တွေကို ခွဲခြားသောစနစ်တစ်ခုကို ပြုစုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Parten ရဲ့အဆိုအရ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မွေးဖွားချိန်မှစပြီး ဖြတ်သန်းသွားရမယ့် social play အဆင့်(၆)ဆင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီကို တွေ့ကြုံခံစားလာရတာနဲ့အမျှ အခြားကလေးတွေနဲ့ ကစားဖို့ လိုအပ်တဲ့ လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။
Onlooker play ဟာ အဆင့်ခြောက်ဆင့်ထဲက တစ်ခုပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အခြားကလေးတွေ ကစားတာကို ကြည့်နေသော်လည်း ပါဝင်ကစားခြင်းမရှိပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ လေ့လာသိရှိပြီး သင်ယူဖို့အတွက် ဒီအဆင့်က မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေအတွက် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု စွမ်းရည်တွေ သင်ယူဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သော အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Unoccupied play – ဒီအဆင့်က မွေးဖွားချိန်ကနေ သုံးလအထိ ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ခြေလက်လေးတွေကို မမယ်၊ ချမယ်၊ လှုပ်ရှားကြည့်မယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီက ဘယ်လိုလှုပ်ရှားသလဲဆိုတာကို ရှာဖွေသိရှိကြတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Independent play – ဒီအဆင့်က မွေးဖွားချိန်ကနေ စတင်ပြီး ၂နှစ်ကြာပါတယ်။ ကလေးက တစ်ယောက်တည်းကစားရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ တခြားကလေးတွေနဲ့ ကစားရတာကို စိတ်မဝင်စားသေးပါဘူး။
Onlooker play – spectator playလို့လည်းခေါ်တဲ့ ဒီအဆင့်အတွင်းမှာ ကလေးဟာ တခြားကလေးတွေ ကစားတာကို စောင့်ကြည့်ပေမယ့် သူတို့နဲ့ ဝင်မကစားပါဘူး။
Parallel play – ဒီအဆင့်က ကလေးအသက် ၂နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်မှာ ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကလေးဟာ အခြားကလေးတွေရဲ့ဘေးမှာ သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ ကစားနေပေမယ့် အတူတူ မကစားသေးပါဘူး။
Associative play – ဒီအဆင့်ဟာ အသက် ၃နှစ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်ပြီး ကလေးအသက် ၄နှစ်အထိ ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကလေးဟာ ကစားရာမှာ အခြားကလေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု ရှိသော်လည်း၊ တစ်နေရာတည်းမှာစုပြီး ကစားနေသော်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတူကစားတာမျိုး မလုပ်သေးပါဘူး။ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်မှုနည်းတာ၊ organization မရှိတာကို မေမေတို့ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
Cooperative play – ဒီအဆင့်ဟာ အသက် ၄နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ကလေးဟာ အခြားကလေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပြီး သူတို့ပါဝင်ကစားလာပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ teamwork နဲ့ကစားတာကိုလည်း သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
မွေးစမှ ၅နှစ်အတွင်းရှိ ကလေးငယ်တွေအတွက် အဆင့်တွေကို ဖော်ပြထားသော်လည်း ကလေးတစ်ဦးချင်းစီဟာ သူတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးပြင်းနေပြီး အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Onlooker Play ကဘယ်အချိန်မှာ စတင်ပါသလဲ?
Onlooker Play က များသောအားဖြင့် အသက် နှစ်နှစ်ခန့်သာဖြစ်ပြီး ၆လမှတစ်နှစ်အထိ ကြာပါတယ်။ များသောအားဖြင့် independent play နဲ့ onlooker play က တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သင့်ကလေးဟာ လူမှုရေးအပြန်အလှန် ဆက်ဆံမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားခြင်းတွေ ပျောက်ဆုံးနေပုံရပါတယ်။ သို့သော် တခြားသူကစားတာကိုကြည့်ခြင်းက ကလေးရဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ ကစားပွဲမှာ မပါဝင်ရင်တောင် စောင့်ကြည့်ပြီး စိတ်နဲ့ မှတ်သားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဂိမ်းကစားပုံကိုသာမက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံကြသလဲဆိုတာကိုပါ သတိပြုမိကြပါတယ်၊
Onlooker Play ကဘာ့ကြောင့် အရေးပါသလဲ?
Onlooker Play ကကလေးတစ်ဦးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးပါပြီး အကျိုးရှိသော အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေ ကစားတာကို ကြည့်တဲ့အခါ ကလေးဟာ မတုန်မလှုပ်နဲ့ မလှုပ်မယှက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ အလုပ်အရမ်းများနေပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့သိမြင်မှုနှင့် လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။
အခြားသူတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းက ကလေးရဲ့လေ့လာမှု၊ အမြင်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ အပြုအမှုတွေ၊ စကားလုံးအသစ်တွေကိုလည်း သင်ယူကြတယ်။
ကလေးဟာ အခြားသူတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သင်ယူကြပါတယ်။ ကနဦးနှစ်တွေမှာ ဒါက အများအားဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက အဓိကစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ တိုးတတ်လာပြီး သူတို့နှစ်သက်တဲ့ လူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ၊ ပုံစံတွေကို အတုယူဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
တစ်သီးတစ်သန့်နေတတ်ပြီး ရှက်တတ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် onlooker play က သူတို့နဲ့အမှန်တကယ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ အတွေ့အကြုံပိုရဖို့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေအတွက် onlooker playက အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“Onlooker Play ရဲ့အပြုသဘောဆောင်ခြင်း”
Onlooker Play ရဲ့ အပြုသဘောများစွာရှိပါတယ်။။
တခြားကလေးတွေအကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကို လေ့လာမိစေပါတယ်
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်
အခြားကလေးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လေ့လာမိစေပါတယ်
သူတို့ရဲ့ သိမြင်မှုနှင့် လူမှုရေးစွမ်းရည်တွေ တိုးတတ်လာစေပါတယ်
သူတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ deductive skills တွေ တိုးတတ်လာပါတယ်။
Onlooker play က မေမေတို့ကလေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးပါသော အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးဟာ လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းမှုတွေကို သင်ကြားဖို့ အုတ်မြစ်ချပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးဟာ ဒီအဆင့်တွေ ပြီးဆုံးလာတာနဲ့အမျှ အခြားသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူတို့နဲ့ သင့်တော်စွာ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံဖို့ ယုံကြည်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်။
Previous articleသားသားမီးမီးတွေကို အမှောင်မကြောက်အောင် ကူညီဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
Next articleကလေးတွေအတွက် ပဟေဠိကစားခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ခု